Masar oo Soomaaliya ka caawineysa howlaha shidaal baarista - Halbeeg News
QAHIRA(HALBEEG)-Dowladda Masar ayaa ballan qaadday in ay gacan buuxdo ka siin doonto Soomaaliya dadaalka ay dowladda ugu jirto in ay kula soo baxdo qeyb ka mid ah kheyraadka hoos ceegaaga ciidda dalka.
Wasiirka batroolka iyo kheyraadka macdanta dalka Masar,mudane Taariq El-molla oo kulan la yeeshay dhiggiisa Soomaaliya Cabdirashiid Maxmed ayaa sheegay in dowladda Masar ay kaalin mug leh ka qaadan doonto horumarinta kheyraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Wasiir Tariq ayaa tilmaamay in dowladaha Masar iyo Soomaaliya ay ku heshiiyeen in wada hadal dheeraad ah ay labada dhinac yeeshaan si loo ambaqaado la isulana fahmo meelaha mudan in laga wada shaqeeyo si loo dar dargeliyo howlaha shidaal baarista.
Wasiirka ayaa ammaanay furasadaha Soomaaliya ay heeysato ee ku aaddan helitaanka ceelal shidaal oo ku yaalla xeebaheeda hodanka ah.
“Fursadaha helitaanka ceelal shidaal ee xeebaha Soomaaliya ayaa sare u kacaya, waayo waxay leedahay xeebaha ugu dheer Afrika” ayuu yiri wasiir Taariq.
Wasiirak ayaa farta ku fiiqay in Soomaaliya ay ka faa’iideysan karto khibradda shirkadaha shidaal qodista ee Masar iyo bixinta qandaraasyada caalamiga ah ee shidaal baarista.
Dhanka kale wasiirka batroolka iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Cabdirashiid Maxamed ayaa ammaanay kaalinta dowladda Masar ay ku gacan siinayso dadaalka ay dowladda Soomaaliya ku dooneyso ka faa’ideysiga kheyraadka dalka wuxuuna intaa ku daray wasiir Cabdirashiid in ka miro dhalinta dadaalladan ay faa’iido weyn ugu jirto dadka Soomaaliyeed.
Kulanka labada wasiir ayaa imanaya kadib markii laba todobaad ka hor warqad uu soo saaray agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka dowladda fedraalka Soomaaliya, Jamaal Qaasim Mursal ayuu ku sheegay in Soomaliya aysan waqti xaadirkan u diyaarsanayn bixinta shatiyada shidaal baarista iyo galista heshiisyo cusub maadaama xeerkii batroolka ee dalka uu wali horyaallo baarlamaanka sugayana in la ansixiyo.
Mursal ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskii maamulka shidaalka iyo wadaagga dakhliga oo ay wada sixiixeen dowlad goboleedyada dalka bishii June 2018-kii uu wali sugayo in la waafajiyo dastuurka iyo xeerka batroolka ee dalka.
Shir looga hadlayay ka hortagga walxaha qarxa oo Geneva lagu soo gaba gabeeyay